Mahazo aina kokoa ve ny tantaram-by karbonina? - Karbaona
Tena > Karbaona > Tanan-tànana karbaona maivana indrindra - mamaly ireo fanontaniana
Tanan-tànana karbaona maivana indrindra - mamaly ireo fanontaniana
Mahazo aina kokoa ve ny tantaram-by karbonina?
Raha tokony hahatsapa ny hovitrovitra tsirairay sy ny tsirairay,fitoeran-karbaonaafaka manampy mandray sy mandoka io resaka io. Rehefa any amin'ny dia lavitra ianao, dia mety hiova izanyfampiononana bebe kokoaho an'ny tananao.
(Swoosh) - Androany isika hiresaka amin'ireo mpitaingina ny safidin'ny kitondro eto amin'ny Abu Dhabi Tour, satria misy safidy malalaka, amin'ny resaka Aero na Standard, fa koa ny sakany sy ny endrik'ireo vongan-drano . (Hira malefaka) - Miaraka amin'i Caleb Ewan izao, iza no ao anatin'ny toerana somary henjana be araka ny fantatrareo rehetra ary ny kitapom-baravarana mihoampampana eto koa. Nandeha nitete tany amin'ny nentim-paharazana ianao ary 16 santimetatra fotsiny no eritreretiko - eny, tsy maintsy nataoko manokana ireo bara ireo satria ity no bara mahazatra eto, mieritreritra aho fa toy ny karazana latsaka vaovao io, saingy Tsapako fa tsy afaka nitifitra azy io koa aho, koa naleoko ilay filatsahan'ny nentim-paharazana, noho izany, eny, nataon'izy ireo ho ahy io bar io ary eny, tery kely izy io, saingy somary lava ny fotony, eny somary kely , Heveriko fa toerana tafahoatra izany, saingy eny, aleoko mihazakazaka mieritreritra fa ny vatako ambony dia somary lava raha oharina amin'ny tongotro, izany no mahatonga ahy mihazakazaka kely toy izany, saingy somary lava ny elanelako.
Eny eny heveriko fa manampy ahy hiditra amin'izany toerana izany - ary farany ny mpitaingin-tsoavaly sasany dia mbola mampiasa ny fitetezana nentim-paharazana ihany, fa tsy ny maro amin'ny vahoaka araka ny hevitrao? - Raha ny marina dia aleoko fotsiny ilay fahatsapana fa rehefa mijanona eto ianao ary mivezivezy dia mahatsapa aho fa afaka misintona ny bara kokoa ianao. Heveriko fa toy ny safidin'ny tena manokana io. Samy hafa ny olona rehetra, ka izany indrindra no tiako kokoa - Manana handlebars henjana be ianao araka ny ampoizintsika, inona no anananao any? - Heveriko fa 38 izy ireo, izy ireo no kely indrindra halaintsika faobe dia afaka mahazo maodely miaraka amin'ny 36, fa ny 38 kosa dia ampy tsara.
Ary rehefa avy nanao fitsapana tonelina be dia be ny rivotra, dia hitanay fa tsy tsara ihany ny ambany, fa tsara koa ny tery, ka ny hevitra dia miditra amin'ny toerana milamina aho ary afaka atao aerodynamika.- Saingy tsy hitanao izany tamin'ny fotoana iray, raha tena mahia ianao, dia mamela ny kiho hivoaka? -Tsy izany, rehefa tena mitondra fiara aho dia mbola mitondra fiara toy izany. Fantatrao fa ao anatiny ny hato-tànako Tsy hoe mitondra fiara toy izany aho, ka mbola miditra ihany.
Ary tsia dia fantatrao hoe rahoviana no hanaovana azy amin'ny herinandro voalohany, okay hafa kely izany. Fa aorian'izay dia milamina ary avy eo rehefa miverina amin'ny 42 ianao dia toy ny mitaingina bus. - Firy ny eritreritrao no napetrakao tamin'ny takela-by safidinao? ? - Misavoana ambony izy ireo miaraka amina ambany boribory roa, dia izay.
Izy ireo no super ergos, fenitra tsara tarehy. Somary nipoitra, 42 ambany ary 40 ambony. Ka mety ho somary mora kokoa amin'izay ianao mba tsy hikapohanao matetika ny tànanao eo am-pelatananao rehefa eny ivelan'ny lasely ianao, saingy misy ihany ny zavatra azonao atao amin'ny bisikileta amin'ny hazakazaka.
Nihazakazaka kely izahay taloha satria 42 foana aho, saingy norefesinay foana avy teo amin'ny sarondoha, fa ny 42 teny amin'ny kapaoty, nefa 44 ny nilatsaka. Ka mazava ho azy fa niverina tany amin'ny 40 sy 42 isika izay somary tsara kokoa ho ahy - 38 afovoany afovoany e amboniny ary 42 eo amin'ny fidinana. Ahoana no nahatonga anao hisafidy ity bara ity? - Tsy nanapa-kevitra aho fa izany no ataon'izy ireo, ka toy ny mahazatra, 42 taona aho, boribory tsotra sy mahazatra ihany, ary rehefa nifindra tany amin'ny Enve izahay dia nanana an'ity bara ity ary izaho te-hanandrana azy, satria fisaka ambony io ary ny hevitra dia ny fampiasana ny bitas fisaka ho karazam-pialan-tsasatra ho an'ny sandriko toy ny rehefa manana bara boribory ianao ary mikapoka lavaka, na mikapoka ianao, rehefa afaka kelikely mahazo fanaintainana amin'ny sandrinao ianao, saingy afaka mitaingina izany mandritra ny ora maro ianao raha tianao.- Efa nanandrana be dia be ve ianao? Fomban'ny rano mitete? Manana endrika somary voafintina ianao eto.
Ireo mpitaingin-tsoavaly hafa, toa an'i Caleb Ewan niresaka tamintsika teo aloha, dia manana filatsahan'ny nentim-paharazana kokoa - eny toa ny nolazaiko, izaho irery no nanana ilay mahazatra taloha ary avy eo nanandrana an'ity bara ity aho ary tamim-pahatsorana, tamin'ny voalohany dia toy ny tsy tiako ilay izy tena tiako izany, tiako ho ambany kokoa ny rano. Satria, araka ny nolazainao, tery loatra ity. Saingy avy eo dia toy ny mandanjalanja hafa fa ny bar dia tsy nanana ny sombin-javatra fisaka teo amboniny ka nafoiko fotsiny izany. - Mieritreritra an'io aho, tsy haiko, angamba mahazo aina kokoa ilay lehibe, nefa tsy manana soroka lehibe aho mba hahafahako mifikitra amina kitara 40 ary eny.
Rehefa manao ny sprint ianao dia momba ny aerodynamic sy ny toeran'ny soroka avokoa, miaraka amin'ny akora aero tsara indrindra dia afaka mahazo vahaolana tsara isika. Mikatona izy io, miolaka, manana iray niraikitra aho tany am-piandohana ary avy eo dia mivadika ho azy. Hitako fa mahazo aina be izy avy eo ary afaka misintona tsara ny sandriko ihany koa.
Ary eny azonao atao koa izany Jereo ny tapa-kazo amin'ny toerana tsara ahodinanao mba hanana switch haingana ao anaty haingam-pandeha, eny heveriko fa io toerana io, ny toerana ambany, ny K ihany no nampiasako, ny mpivady farany K, satria ambany be izany, tsia? Satria te-ho aerodynamika amin'ny sprint aho ary avy eo afaka mahatsapa tsara, afaka mijanona amin'ny ambaratonga. - Ary manao ahoana ianao? Moa ve io endrika sy sakany io tsy mitovy amin'izay hampiasainao amin'ny velodrome? - Mitovy izany. Mitovy tanteraka io, ny curve sy ny zavatra rehetra, satria ny refy sy ny zavatra rehetra foana no ampiasaiko.
Miezaka mampiasa ny habe sy ny kitapom-batsy mitovy aminy foana aho ary mitovy foana ny zavatra eny an-dalana satria te hitsambikina avy eny amin'ny arabe mankamin'ny làlana aho ary avy eo amin'ilay làlana mankeny amin'ny lalana tena haingana ary tsy misy olana. (Horn mozika) - Ivotoerana mitondra fiara hatrany afovoany aho hatramin'ny naha-zatovo ahy, mpangalatra whipernapper. Eny, hitako foana fa mety io.
Fantatrao fa tonga lafatra fotsiny izy io ary fantatrao fa rehefa mandeha ny olona sasany dia mieritreritra raha somary tery ianao dia aerodynamika kokoa io, fa avy eo fantatrao fa raha tery kokoa ianao dia mety hitombo kely amin'ny kiho, ka eny, hitako fotsiny ity ho fananganana mety amiko. - Ary manana fomban-drazana, saika toa Merck, ianao amin'io lafiny io? - Dimy taona izao no nitondrako ireto bara ireto. Ilay karazan-kazo nentin-tanana dee p ihany.
Heveriko fa ny fanovana tokana ananantsika dia ny fanamboarana namboarina anaty rehetra, izay mbola tsy ananako. Tsy mbola nataonao ho an'ny rehetra ity takelaka ity ka mieritreritra aho fa hanao an'io ianao ary tsy ho ela dia ho lasa iray - tiako ny milaza aminao fa misy ny fangatahana tena manokana ao amin'ny faritra Canyon. nisy nandritra ny taona 41, fa miaraka amin'ny rafitra fitantanana miharo, izay anananao tery araka izay tratra ary mbola manana ny halavany 12 na 13 cm eo aminy. Amin'ny bisikileta, ny fampiononana no zava-dehibe kokoa amiko.
Ary ny zavatra lehibe ho ahy dia ny takelaka fisaka fotsiny eto. Tsy tiako ny misy karazana milentika. Ary avy eo manana curve mitete fa tsy karazana bontso ao.
Hitako rehefa manana ny fomba ilazany azy aho? Ohatra, aiza no ergonomic kokoa. Rehefa manana an'izany aho dia somary maty rantsan-tànana ary ny rehetra - Hilaza ve ianao fa mandany fotoana bebe kokoa amin'ny hood ianao, fantatrao, na dia manandrana mahazo aerodynamika aza ianao fa tsy mitete? - Ie, eny amin'ny fiofanana dia manandrana tara tara aho nefa na dia toy ny hariva aza dia hitako fa tsy tadidiko hoe taiza marina aho fa somary nijanona tsy nieritreritra momba azy io rehefa mifantoka amin'ny fiezahana haka haingana azy fotsiny be, fa na izany na tsy izany dia miondrika miaraka amin'ny rotsak'orana amin'ny hood aho ary mampiasa azy roa. Raha mbola lalina aho dia izay ihany no zava-dehibe - Notohanan'ny Vision izahay tamin'ity taona ity, ka nomen'izy ireo an'ity kitapom-baravarana aero ity izay heveriko fa tsara satria mahazo aina tsara izy ireo nefa mbola manana ny tombony azo avy amin'ny aerodynamika. Manolotra.
Nampiasa ny paosin-tanana tery tery aloha aho tamin'ny asako, saingy miharihary fa toy ny fampifangaroana izany ka amin'ny habe voafetra ihany no misy azy ireo. Ka amin'ity taona ity dia mampiasa ny cm 42 mahazatra antsika aho. Talohan'izay dia nampiasa 40cm aho fony mbola nampiasa kofehy aluminium.
Ary eny, saingy tiako izany, tsara izy ireo - ary amin'ny endriny dia hitanao ny mpitaingina sasany izay manana latsaka nentim-paharazana kokoa, manana ny iray voafintina kokoa izy ireo, izany dia safidy tsy fantatrao rehefa avy nandinika ianao? - Nampiasako hatrany ireo endrika nentim-paharazana saingy tsy fanaon'izy ireo izany ao amin'ny kinova aero ka ananako ireo ankehitriny ary tiako izy ireo, tsy maninona - Ka safidy maro isan-karazany eo amin'ireo mpitaingina mpomba tsy tianao ny hadinadinina. satria tsy dia manana safidy firy izy ireo amin'ny lafiny sakany sy latsaka avy amin'ireo mpanohana azy. Marina, raha nankafizinao ity lahatsoratra ity, omeo anay ny thumbs eto ambany. Misoratra anarana amin'ny GCN Tech amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tany ary raha te hahita ny fomba fisafidianan'ny mpitaingina ny fotony ianao dia afaka mahita etoana ilay lahatsoratra.
Inona ireo bara MTB maivana indrindra?
Fifaninanana hazakazaka manaraka R 35 Carbon
Amin'ny 215-grama, dia nybara maivana indrindraIzahay dia nanandrana ary fomba azo antoka hanavotana lanja amin'ny bisikiletanao.
Manankarena: tianao ve ny hahavery ireo kilao ireo, mamono ireo kilao ireo, ary mampiakatra ny bisikiletanao ho mavesatra? Aza mitady lavitra intsony, satria eto aho mba hanampy. Manankarena: Tsy mora foana ary indraindray tsy afaka mandeha manodidina ianao. Ireto misy fomba tsara hanamboarana ny bisikiletinao sy ho mora kokoa.
Manankarena: esory izany. Manankarena: ny mitaingina tubeless dia fomba tsara hanalana lanja amin'ny bisikiletanao. Tsy vitan'ny hoe mampihena ny fihodinan'ny fihodinana ianao fa mety ho voan'ny kodiarana fisaka koa.
Mandresy. Raha mandeha mitaingina tubeless ianao, dia mora ampiasaina ny sisin'ny tubeless, saingy misy kitapo miangona eo. Na izany aza, tena manoro hevitra mafy ny kodiarana tsy misy fantsona aho satria hanamora ny fiainanao izany.
Niresaka momba ny fandehanana tsy misy fantsona izahay, fa ny kodiarana tsy misy fantsona nolazaiko, na ny kodiarana amin'ny ankapobeny fotsiny? soavaly mahatoky eto, manana kodiarana hazakazaka XC aho ary kodiarana maivana be izany. Raha mpitaingina mavesatra ianao dia mety mitady kodiarana enduro na downhill izay misy matevina kokoa ny sisin-dàlana ary koa ny tampon'ny kodiarana. Raha mpitaingina XC ianao na olona somary maivana kokoa amin'ny bisikileta ka te ho very ireo grama ireo, dia mety hamonjy grama an-jatony amin'ny kodiarana roa ireo kodiarana XC manify kokoa.
nangalatra ny bisikiletako tato ho ato
Mpandresy ao amin'ny bokiko izany. Manankarena: Dropper dia nandefa lahatsoratra tamin'izany. Fantatro izao fa nihevitra izahay fa izany no zavatra tsara indrindra satria novakian'ilay kapila, na mofo nohetezana aza, saingy ilaina ve izany? Raha mandinika izany ianao dia mety milanja 600 grama ny rano mitete.
Paositra iray mafy, tokony ho 200 grama izany. Omeo na raiso, mazava ho azy. Tena mitahiry lanja be izany.
Rehefa mieritreritra ny mekanika rehetra ianao, ny hydraulika rehetra, ny zavatra madinidinika miaraka amin'ny tariby, ny levera, dia mieritreritra ianao fa niteny fotsiny izy hoe: 'Ilaina ve indraindray? Ankehitriny, raha toa ka mifototra kokoa amin'ny XC ianao ary milaza fa tsy manao fidinana lava be sy andro maninjitra amin'ny bisikileta, dia handoa izany ianao raha mitahiry lanja ary mety tsy hametraka doka eo an-tampon'ny lisinao. . Manankarena: Mety mieritreritra ianao hoe: 'Manankarena, tsy ireo no fomba mora indrindra hanamaivanana ny bisikiletako. Ahoana no anaovako an'izany? Ahoana no ahafahako manamaivana kely ny bisikiletako nefa tsy mandany vola be? 'Tsy hahavonjy lanja be anao izany, fa mety hampahazo aina kokoa ny mitaingina anao ary fehikibo izany.
Fantatro. Tsy nieritreritra an'izany avy hatrany ianao, fa ny tena marina, ny fantsom-bolo dia fomba iray lehibe hitsitsiana grama vitsivitsy, hitehirizana kilao vitsivitsy, ary hanao fahagagana ho an'ny tananao. Manankarena: Betsaka ny fiankinan-doha mahatsiravina any, saingy vitsy amin'izy ireo no lafo toa ny iray manaraka.
Inona no lazaiko momba an'i Carbon. Ie. Amin'izao fotoana izao, ny zava-drehetra momba ny bisikileta dia azo atao avy amin'ny karbaona amin'ny bisikiletanao ary mamonjy lanja betsaka, indrindra amin'ny singa lehibe sasany toy ny fork, kodiarana, kitapom-batana ary fotony.
Amin'ny karbaona anefa, tsy ny fitehirizana lanja fotsiny izany. Ekena fa ny ampahany tsara amin'izany dia avy amin'ny bisikileta. Fa ny fitomboan'ny fampisehoana sy ny fahatsapana dia mety ho eo ihany koa.
Ny zavatra toy ny kodiarana mahery, ny fampiatoana henjana, ireo rehetra ireo dia afaka manova ny fomba fandehanan'ny bisikiletanao, saingy mampitandrina anao aho izao, mety hanjavozavo ny kitapom-bolanao raha ny momba ny fanitsiana anao rehefa miantsena ianao dia efa nampitandremana ianao. Manankarena: namboarinao mafy ny bisikiletanao tamin'ny ampahany karbôna an-kavia sy havanana ary eo afovoany. Kodiarana, kodiarana, tsorakazo, na inona na inona, no noheverinao azy.
Mihevitra ianao fa very ny lanja rehetra fa tsy tiako ny manapaka Misy fomba hafa tokana hanavotana lanja, titanium. Fantatro, rehefa nieritreritra ianao fa tsy afaka mandray tsindry hafa ny kaonty banky, misy zavatra hafa. Miresaka momba ny baomba titanium, lasopy titanium, pedal titanium mahafinaritra aho.
Ireo ampahany fanampiny ireo dia hamonjy grama anao. Raha ny marina dia mila fatorana bebe kokoa amin'ity bisikileta ity aho. Lasa aho.
Izaho dia handeha. Rehefa avy eo. Mila mamatotra aho.
Fatorana taloha. Raha ny tena izy, somary noana aho, afaka nihinana Thai, kari maitso na kari mena izao. Curry rehetra.
Manankarena: Ka any no ananantsika azy, fomba vitsivitsy azo ampiharina sy tsy mahasalama hanamorana ny bisikiletanao, izay manampy ahy hihanika izany havoana izany. Toy ny mahazatra, raha te hahita bebe kokoa ianao dia aza adino ny manoratra amin'ny fantsona Old thumbs up ary hiala aho. Mandrapihaona.
Tsy dia izany loatra. Ho an'ny fakantsary izany.
Mendrika ve izany ny kitapom-bokatra aero karbonina?
Ny fihenan'ny lanjany, ny endriny isan-karazany, ny haavon'ny fiarovana, ny fampiononana ary ny fahombiazan'ny akarbaonafisotroana dia manintona daholo. Na izany aza, ho an'ny ankamaroantsika dia ny faharetana, ny kalitao ary ny vidiny ambany amin'ny aliminioma dia isaina bebe kokoa. Raha te hanamboatra bisikileta malefaka sy maivana indrindra ianao ary tsy mandeha amin'ny teti-bolakarbaona.
Azonao atao ny mandany vola betsaka araka izay tianao hahatonga ny bisikiletanao ho lasa aerodynamika bebe kokoa, fa ny vatanao no manakana anao. Raha ny marina, ho an'ny ankamaroantsika, ny vatantsika no mitazona antsika fotsiny, fa na izany aza, ndao isika hamirapiratra amin'izany, sa tsy izany? Avy eo ny zavatra tsara indrindra azonao atao mba hahatonga anao ho mihetsika haingana dia ny mividy bara aero roa. Eny, tsy hataon'izy ireo ho lasa aerodynamika bebe kokoa ny bisikiletanao, fa ho lasa aerodynamika bebe kokoa ianao.
Mazava ho azy fa tsy ara-dalàna izy ireo amin'ny hazakazaka an-dalambe manomboka, fa ho an'ny hetsika maharitra, fitsapana fotoana ary triathlons dia fampiasam-bola tena tsara izy ireo, fa iza no hifidy anao? (Mozika malaza) Manana safidy roa lehibe ianao hatao, voalohany, izay antsoina hoe clip-ons izay mivezivezy eo amin'ny kitapom-by mahazatra amin'ny bisikileta, ary avy eo dia manana zavatra toa ireto koa ianao, dia ny kitapo aero feno, ary bebe kokoa ao an-trano amin'ny nentim-paharazana iray. bisikileta fitsapana fotoana. Tsy mila bisikileta manokana intsony ianao izao, mila mampiasa an'ity, mila fitaovana isan-karazany r levers, fametahana frezy samy hafa ary noho izany isaky ny miova avy eo amn'ny arabe nentin-drazana ianao mankany amin'ny baoritra feno aero, tariby vaovao tanteraka ary mazàna dia ho mekanika mahay Maharitra adiny iray eo raha toa ka hitondra anao ireo mpanao clip aloha ity asa ity, sa tsy izany? Hasiana volo eo amin'ny faritra afovoan'ny tananao raha hitanao ny sasany amin'izy ireo, toa ireo avy amin'ny Profiles, dia ahodina eo an-tampon'ny tananao ka atsangano kely ny kiho ary ataovy mahitsy kokoa ny toerana misy anao. Na izany aza, misy miakatra eo ambanin'ireo hazondamosina, ka avelany hidina kely ianao.
Izay iray nofidinao izao dia miankina amin'ny karazan-tsoavaly hataonao aloha, fa ny halehiben'ny toerana misy anao ihany koa. Fiandohana. Noho izany, ho an'ny olona sasany izay mety hanao hetsika maharitra faharetana izay aero dia ambaratonga faharoa ahazoana fampiononana, avy eo mety tsara raha somary avo kokoa ianao ka mety maniry handeha amin'ny fiainana iray? ambany kely ary amin'ireny tranga ireny dia mety te-handatsaka ny tadinao koa ianao na manova azy tanteraka amin'ny iray izay hampidina anao lavitra kokoa.
Tokony hikaroka paty azo ovaina ihany koa ianao, na ho an'ny haavony, na inona na inona kitanao, ary ny sakany koa, satria ny olona sasany dia hahita fa mahazo aina kokoa amin'ny kiho kokoa sy tanana mivelatra kokoa tadiavin'ny hafa izy ireo. Mikasika izay aerodinamika dia indrisy fa tsy mazava izy io satria miankina be amin'ny sakan'ny sorokao. Miala tsiny aho.
Ary ny zavatra farany tsy maintsy eritreretinao dia ny endrik'ireo fanitarana ihany. Ireo, ny T2 +, no safidiko ary izy ireo dia mitazona ny tananao betsaka kokoa. Mahatsiaro ho haingana kokoa izy ireo, na dia mbola tsy nanandrana azy ireo ihany aza ny tionelin'ny rivotra ka tsy fantatro hoe inona no fiantraikan'izany eo amin'ny toerako, saingy mety ho hitanao fa rehefa avy nipetraka teo ambony bisikileta nandritra ny fotoana maharitra ianao dia nijery ireo lalao Ultra Endurance sport izay azonao atao mila fanitarana izay hiafara amin'ny fanetsehana kely kokoa.
Ny teboka farany dia ny triathletes manao hazakazaka volavolan-dalàna mba hahatsiarovany fa ny faran'ny extension anao dia tsy maintsy vitaina alohan'ny halavan'ny fetran'ny frein-nao, ka tokony ho fohy kokoa ary tokony hifandray eo afovoany koa izy ireo. (mozika maivana) Ary ahoana ny bara aero efa lehibe? Raha vao mieritreritra ny hividy ny sasany amin'ireto ianao dia tsy maintsy dinihinao ihany koa fa mila levers manokana ianao ary koa ny levers gear, izay mazàna dia aerodynamika kokoa noho ny kitapom-by, ka tokony hividy aerodynamika be indrindra ianao ireo, angamba mety ho zavatra tianao ho raisina rehefa manapa-kevitra ianao, toy ny mazava ho azy fa irinao ho ara-dalàna UCI rehefa mampiantrano hetsika voasazy UCI ary izany no tiako holazaina fa izy ireo dia tokony ho ny ampitso telo hatramin'ny iray refy hatrany amin'ny halaliny, noho izany An ny bara fototra eto dia hitanao fa mifanandrify amin'izany izy, saingy malalaka kokoa noho ny lalina kokoa. Ankehitriny ny bara aero feno tsimoka dia mety manana fanamorana firy kokoa noho ireo clip-ons, saingy mbola betsaka ny azo lalaovina, noho izany, azonao atao ny mamindra ny sakan'ny pads mankany ivelany ary avy eo azonao atao tsara ny mampitombo ny stack ao amin'ireo pad profil. , koa ampitomboy ny elanelana misy eo amin'ny bara fototra sy ireo fanitarana hatramin'ny 10 cm.
Ny kitaponao aero dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny fividiananao. Raha manipy azy ireo amin'ny bisikiletanao fotsiny ianao dia mety ho hitanao fa tsy mahazo aerodynamika intsony ianao. Tsy mila mampiasa vola amin'ny bisikileta feno ianao na dia tsy dia manana traikefa loatra aza ianao dia mety ho hevitra tsara izany, fa aza hadino ny mametraka ny bisikiletanao amin'ny mpampiofana anaty trano, na eo alohan'ny fitaratra lava na ny fakan-tsary. ary zahao ny toerana voalohany misy anao sy ny faritra misy anao, izay iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny aerodynamika ary raha ny marina ny fanovana ny fanamboarana anao dia hanova ny faritra misy anao.
Misy ny lalàna volamena, amin'ny ankapobeny, ny fahombiazanao sy ny fampiononanao dia tokony ho zava-dehibe kokoa noho ny aerodynamikao, koa raha tokony ho amin'ny toerana faran'izay mafy izay toa aerodinamika kokoa ianao dia mifikira aminy rehefa miondrika lavitra ianao, mihodina ny valahanao ary midika izany fa ianao koa te-hanosika ny lasely handroso kely kokoa, noho izany dia nasiako tsangambato seza iray ho an'ny sezan'ny tsipika ary natosiko handroso kokoa ilay lasely, azo antoka fa tsiambaratelo ho haingana kokoa. Hamarino fotsiny fa mandany fotoana kely ianao amin'ny fisafidianana ireo mety sy fananganana azy ireo. Hamarino tsara fa misoratra anarana amin'ny GCN ianao, maimaim-poana tanteraka, tsotra dia tsotra, ny hany mila ataonao dia tsindrio eto an-tany ary avy eo raha mitady atiny bebe kokoa ianao dia manana vitsivitsy tena ilaina ho anao, ao anatin'izany ny fametrahana sy mametraka ny clip eo amin'ny bara aero, jereo, milaza fa misy ifandraisany izany.
Mendrika hatao fanavaozana ny kitapon-karbona ve?
Betsaka ny olona no mihevitra fa ny tombontsoa voalohany amin'nykarbaonabisikileta an-tendrombohitrakitapom-batsymavesatra maivana kokoa izy ireo. Raha tombony maivana kokoa ny lanjan'izy ireo maivana kokoa, ny fanatsarana bebe kokoa dia ny fanalefahana ny hovitrovitra ary manampy henjana izay mahatonga azy ireomanan-danjany fiakaran'ny vidin'ny aluminiumkitapom-batsy.
fitsaboana maimaika ny arabe
Hampihena ny hovitrovitra ve ny tantana karbaona?
Mampihena ny hovitrovitra ny tantaram-by karboninaraha mbola mahazo maodely malefaka ianao. Ny fork, ny kodiarana, ny géometry ny frame, ary ny endrik'ireokitapom-batsy diany loharanon'ny fampiononana voalohany. Ny fitaovan'nykitapom-batsytsy dia avo loatra amin'ny lisitra.
Mila tsorakazo misy alim-by karbonina ve ianao?
Ie. AlumisakanaHO AN'NYkarbaonabara no mahazatra. Hamarino fotsiny fa clamp 4 bolt io.Tongotra karbaonadia voaolana fotsiny i alukarbaona.24. 2009.
Inona avy ireo fitoeran-tànana bisikileta mora indrindra?
Darimo Ellipse CarbonTanan-tànana
Mety ho ilaymampirehitrafamokaranatsorakazo lalanaeo amin'izao tontolo izao izao. Mampiseho tsipika moka malaza (77 tratra / 128 mitete) ary misy amin'ny sakany 3 (40/42/44). Averina indray fa ireo dia vita tanana-to-baiko, ka ny mpitaingina dia afaka mamaritra ny famaranana / decals ary na ny safidin'ny karbaona aza.
Mendrika ve ny bara mitete Aero?
Raha ilay teo aloha dia azonao atao ny manangana nykitapom-batsyavo kely kokoa mba tsy hiankina lavitra be ianao rehefa any amin'ny fihirana. Raha hafainganam-pandeha lavitra, dia avy eomitetenytrano fisotroanaarak'izay azonao atao ary atombohy ny fiasa amin'io fahafaha-manao io. Saingy amin'ny ankapobeny, eny dia misy fiovana lehibe, fahatsapana, fampiononana (na tsara na ratsy) ary hafainganana.
Mendrika ve ny gazy karbonika?
Tsy toy ny singa hafa,Tongotra karbaonaAza manolotra tahiry mavesatra mihoatra ny sakaizan'izy ireo. Matetika nyTongotra karbaonamilanja mihoatra ny alimo maivanavokatry, toy ny Syntace Force 109SAMPA(99g) na 3T Team StealthSAMPA(105g).03.05.2017
Mampisy fahasamihafana amin'ny bisikilety ve ny bara karbonika?
Fanatsarana nykarbaonaafaka mamoaka fanatsarana ny aerodynamika, mampihena ny lanjany ary miankina amin'ny safidinao, dia mety hampihena ny hovitrovitra bebe kokoa alohan'iomanaony lalan-kalehany mankany amin'ny tananao na hampitombo ny hamafiny mba hampitomboana ny mari-pahaizana amin'ny fikirakiranao. Na ny tsara indrindra azabisikiletadia handray soa avy amin'ny baobila nohavaozina.07.01.2021
Iza amin'ireo ny baoritra karbonika fenoina maivana indrindra?
Pro dia manambara ny kitapo karbonika feno hazavana feno hazavana indrindra eny an-tsena. Ny kiran'ny New Shimano Pro Vibe SL dia maivana 15 isan-jato sy mahery noho ny maodely Pro Vibe ankehitriny, hoy ny marika. 7 Jolay 2018 5:00 hariva.
Iza no tena fitantanana bisikileta an-tendrombohitra karbaona?
1. RXL SL Carbon Mountain Bike Handlebar 2. EC90 Carbon Mountain Bike Handlebar 3. RXL SL Carbon Handlebar Road Bike 4. Renthal Fatbar Carbon V2 Handlebar 5. ToseEK Aero Integrated Carbon Handlebar 6. IRON JIA'S Carbike bisikileta 7. Fitaovana karatra OneUp Carbon 8. Funn Black Ace Riser Bar ho an'ny Mountain Bike 9.
Iza ny barany hazavana maivana indrindra eny an-tsena?
Ny bara faran'izay kely indrindra amin'ny vidiny mirary dia ny Zipp SL Short & amp; Marivo. Tonga amin'ny 173g mandritra ny 40cm izy ireo. Raha tsy zavatra ny vola dia afaka mandeha amin'ny bara AX Lightness, Mcfk na Schmolke ianao. Ny farany navoakan'i drainyoo tamin'ny Sun Mar 23, 2014 10:58 alina, novaina in-1 in total.